I-Recipe yePumpkin Pancakes
I-pancake yamathanga enamafutha athile Akukho nto "kwi-repertoire" yakho yokupheka kompu, kwaye le recipe iya kucebisa incwadi yakho yokupheka! Le recipe ibe yinto endiyifunayo. Ingcamango yamathanga yaphuma ngokungaqinisekiyo kwaye iyinyameko, ibe yinto emnandi, ithanga litshintshile ngokuthe tye. Isiphumo - i-pancakes ekhanyayo kunye nokutya! Yaye yintoni ehle kakhulu negolide! Elula ukupheka, anokupheka ngesidlo sasekuseni ngeveki okanye mhlawumbi ukutyhukela abantwana esikolweni! Ewe, ihamba ne yogurt okanye i-ayisikrimu - iya kuba yidiskhi enhle!
I-pumpkin puree 400 g
Umgubo wengqolowa 1.75 tbsp.
I-Baking Powder 3.5 tsp.
I-cinnamon powder 1 tsp.
I-Nutmeg phantsi kwe-0.5 tsp.
Umgangatho we-0.5 tsp.
I-Ginger eyomile 0.5 tsp.
Inyathelo 1 Ukwenza i-pancake yamathanga, uya kufuna iimfumba ezingenasiphunga, ufulawa, iqanda, ubisi, iswekile, ityuwa, i-powder baking, i-sinamon, i-ginger, i-nutmeg, i-clove, i-oil kunye neoli ye-sunflower.
Inyathelo 2 Hlanganisa zonke izithako ezomileyo: ufulawa, i-powder baking, ityuwa, iziqholo kunye noshukela.
Inyathelo 3 Hlanganisa ubisi kunye neqanda. Yongeza ioli kunye nokutshitshisa de ukukhankanywa.
Inyathelo 4 Hlanganisa i-puree yamatope kwaye udibanise kakuhle.
Inyathelo 5 Thela izithako zamanzi kwi-mix mix and mix mix.
Inyathelo 6 Ukucwenga i-pan yokucoca kunye negrisi encinci ngeoli yeoli. Beka intlama encinci kwaye ucheke phezu kobushushu obuphakathi kuze kube yilapho ama-pancake ayeka ukukhula (imizuzu emibini).
Isinyathelo 7 Vula i-pancake uze ufune enye iminithi uze ulungele.
Isinyathelo 8 Khangela ngokutshisa ngekhilimu omuncu nobusi, okanye nge-ice cream ye dessert!
Inkukhu nge-sauce eshizi
Iipatties kunye nebhekoni
I-Fugas kunye ne-anyanisi kunye ne-rosemary
Ikhekhe le "Tweed"
Panna ikotera ikhofi
ICalifornia yagcoba i-Veggie sandwich
Indlela yokuziphatha kwintlalo engaqhelekanga?
Eyona nto yenzeke yinto enhle kakhulu kumhla: indlela yokonwabela umntu omthandayo
Uphawu lomntu okanye indlela 'yokuthengisa' wena?
I-shampoos yemvelo yeenwele ezinamafutha: iincwadi zokupheka ezilungele ukuzenzela
Ii-cutlets ezifakwe ngamakhowe
Isaladi kunye neebhunge ezibhakiweyo kunye noshizi oluhlaza okwesibhakabhaka
I-Turkey fillet kwi-coconut ubisi
Nguwuphi umdlalo onokuyidlala nomyeni wakho?